Children's Cloud Silicone Mats Insulation Mobile Plate Waterproof Environmental Student Mats factory and manufacturers |Hanying
သားသမီးရဲ့တိမ်တိုက် Silicon ဖျာလျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုမိုဘိုင်းပြား waterproof ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကျောင်းသားဖျာ
Overview Quick Details Table Decoration & Accessories Type: Mats & Pads Material: Silicone Feature: Eco-Friendly Place of Origin: Zhejiang, China (Mainland), Zhejiang, China (Mainland) Brand Name: HANYING, HANYING Model Number: N023 ...
စားပွဲတင် Decoration & ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား:
ဖျာ & Pad တက်ဘလက်များသည်
Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မကြီး), Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
47,8 * 27cm
80PCS / ပုံးက The ပြင် box ကိုအရွယ်အစား is48 * 39 * 36 စင်တီမီတာ။
ningbo, ရှန်ဟိုင်း, Shenzhen, ကွမ်ကျိုး
5 ~ 15 ရက်
ထိုကဲ့သို့သောပလပ်စတစ်ဖိနပ်ထိန်သိမ်း, မီးဖိုချောင်သိုလှောင်မှု box ကိုရေချိုးခန်းသိုလှောင်မှု box ကိုစီးရီးအလှကုန်သိုလှောင်မှုသေတ္တာအဖြစ်ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်၏ 1Professional ထုတ်လုပ်မှု။
2ထုပ်ပိုး ပုံစံဒီဇိုင်း အရသိရသည် ဖောက်သည် လိုအပ်ချက်များကို , ကိုယ်ပိုင် ထုပ်ပိုး , ပု ထုပ်ပိုး လည်းရနိုင် နှင့်အတူမှတ်သား ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (လိုဂို) , ဖောက်သည်များက "တရုတ်မှာရှိတဲ့လုပ်" စတစ်ကာ add ဒါပေါ်တွင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဃ သင့်ရဲ့ eveloping ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
3ငါတို့သည်ကိုယ်အရ production development department နှင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဒီဇိုင်းအသစ်စံချိန်စံညွှန်းများ ofexcellence set .
အမေဇုံ, AliExpress, eBay, စူပါမားကက်များတွင်အောက်ပါထုတ်ကုန်ပူရောင်းချခြင်း။
စားပွဲပေါ်မှာဖျာနှင့်စားပွဲကြားရှိမထိုက်မတန်တကယ်စျေးကွက်အပေါ် PVC ပစ္စည်းထံမှကွဲပြားခြားနားသော, ကောင်းသောခက်ခဲများနှင့်ကိုက်ညီရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်
ငါ့ကိုများအတွက် placemats လှပသောသူမြားအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ပထမလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ ထွက်. သယ်ဆောင်ရန်လည်းအလွန်အဆင်ပြေသည်။
ထွက်ကို ယူ. အလေးအိတ်၌တစ်လိပ်သယ်။
ဆီလီကွန်၏နူးညံ့မှုကိုလည်းအလွန်လက်တွေ့ကျတဲ့ placemat အလွန်ကောင်းလှ၏
မိခင်တစ်ဦးအဖြစ်, သငျသညျမင်ျဂလာရှိလိမ့်မည် နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ကြလိမ့်မည်
ကျနော်တို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် entity စက်ရုံများနှင့်အတူတစ်ဘက်ပေါင်းစုံကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြည်တွင်းအရောင်းလုပ်နေတာနှင့်အွန်လိုင်းထုတ်ကုန်တင်ပို့။ ငါတို့သည်လည်းဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ OEMs customize နှင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာအဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ခြောက်လဌာနခွဲရုံး Longgang ခရိုင်၏ဦးတည်ချက်, ရှန်ကျန်း Shengyou Tatsu ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံ, Yiwu လက်ဝတ်ရတနာ Co. , Ltd Asahi Longgang ခရိုင်, ရှန်ကျန်းကိုသင် Jia Da ဗဓေလသစ်စက်ရုံ, Yiwu ဟန် Ying ကဒုတိယနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကို Co. , Ltd ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်စားဖြစ်ပါတယ် , Yiwu Beiqi ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များစက်ရုံ, ရှန်ကျန်း Hui Sheng Jia နေ့စဉ်ကုန်စည်ဒိုင် Co. , Ltd ဟာပလတ်စတစ်စက်ရုံလုပ်သားများအပေါ်ခြောက်လအကိုင်းထက်ပိုမို 1000 ကလူတစ်ဦးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငါးခုဂိုဒေါင်များရှိသည်, နေ့စဉ်တင်ပို့ရောင်းချမှုသည်အလွန်ကြီးမားဖြစ်ကြသည်သင်သည်လည်းလုပ်နိုင် ထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်ကာလပတ်လုံးအသင်ရှေ့ဆက်သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြထားအဖြစ်ကျနော်တို့ပြီးအောင်အတတျနိုငျဆုံးလိမ့်မည်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးအတော်လေးအသံကစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, ခိုင်မာတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်များနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများရှိပါတယ်။ ဥရောပ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ 20 ကျော်နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတင်ပို့နေချိန်မှာအခုတော့ Changsha, ဝူဟန်, Yiwu နှင့်တိုက်ရိုက်အရောင်းဆိုင်များတွင်ကို set up အခြားမြို့များထဲမှာ, ထုတ်ကုန်, တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးရောင်းချကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဖက်ရှင်နဲ့ထူးခြားတဲ့စတိုင်, အရောင်ဖက်ရှင်, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်း, လက်ရာမြောက်သောလက်ရာ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုအားဖြင့်လိုက်နာယုံကြည်မှုနှင့်ရပ်ရွာဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်စားဖြစ်ပါသည်, အားလုံးမိတ်ဆွေများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းငှါလာကြ, လမ်းညွှန်မှုနှင့်စီးပွားရေးညှိနှိုင်းမှုကြိုဆိုပါတယ်။ "ဖွံ့ဖြိုးရေးများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှရှင်သန်ရပ်တည်ရေး၏အရည်အသွေး," က "စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်လက်တွေ့, ရှေ့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်သော" စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရှေ့ဆက်နှင့်ပိုမိုဘုန်းအသရေမျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ မြျှောလငျ့နှင့်ဖောက်သည်များ၏အများစုအတူတကွချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏ဒဏ္ဍာရီကိုသွန်းလေ၏။
Eco-Friendly အပူကိုခံနိုင်ရည် Mat
မီးဖိုချောင် Tool ကိုအပူကိုခံနိုင်ရည် Mat
non-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ မီးဖိုချောင်ကော်ဖီ Mat
silicon ဖျ Bowl Pad
အစားအသောက်တန်းဆီလီကွန် Anti-ပူလက်အိတ် thickened ကိုးကွယ် ...
ပူပြင်းတဲ့ဖုန်စုပ် insulator တွင်လည်းကာတွန်း 304 stainless Stee ...
mDesign ပြိုကျဖျအထည်အလိပ်ကိုပြုစု Drawer ...
အံဆွဲ Divide foldable က Non-ယက်အထည်အလိပ် Organ တွေကို ...